फेब्रुअरीमा होक्काइडो मौसम! तापमान, वर्षा, कपडा - Best of Japan
जापानको सप्पोरो, होक्काइडोमा फेब्रुअरीमा सप्पोरो हिउँ फेस्टिवल साइटमा हिउँ मूर्तिकला। फेस्टिवल साप्पोरो ओडोरी पार्क = शटरस्टकमा वार्षिक रूपमा आयोजित हुन्छ
जापानमा फेब्रुअरी! कसरी सुन्दर हिउँदको संसारको मजा लिन >
फेब्रुअरीमा, सप्पोरो हिउँ उत्सव सहित, होक्काइडोमा धेरै जाडो चाडहरू आयोजना गरिन्छ। यस कारणका लागि, त्यहाँ धेरै मानिसहरू यस समय होक्काइडो जाँदैछन्। यद्यपि फेब्रुअरीमा, होक्काइडो एकदम चिसो छ। यदि तपाईं फेब्रुअरीमा यात्रा गर्ने योजना गर्दै हुनुहुन्छ भने, कृपया जाडोबाट पर्याप्त सुरक्षा नबिर्सनुहोस्। यस पृष्ठमा म फेब्रुअरीमा होक्काइडोको मौसमको बारेमा विवरणहरू प्रदान गर्दछु। यस लेखले होकाइडोको फेब्रुअरीको मौसम कल्पना गर्न तपाईंलाई मद्दत पुर्‍याउन धेरै चित्रहरू समावेश गर्दछ, त्यसैले कृपया उनीहरूलाई सन्दर्भ गर्नुहोस्।
होक्काइडोमा मासिक मौसमको बारेमा तल लेखहरू छन्। स्लाइड मार्फत र महिना को लागी तपाइँ अधिक जान्न को लागी चयन गर्नुहोस्।
तल फेब्रुअरीमा टोकियो र ओसाकाको मौसम बारे लेखहरू छन्। टोक्यो र ओसाकासँग होक्काइडो भन्दा भिन्न मौसम अवस्था छ, त्यसैले कृपया सावधान हुनुहोस्।
फेब्रुअरीमा होक्काइडो बारे प्रश्न र उत्तर
फेब्रुअरीमा होक्काइडोमा मौसम (अवलोकन)
Hokkaido फेब्रुअरी को मौसम मा मौसम
फेब्रुअरीको बीचमा होक्काइडो मौसम
फेब्रुअरीको अन्तमा होक्काइडो मौसम
के होक्काइडोमा फेब्रुअरीमा हिउँ पर्दछ?
यो फेब्रुअरी मा होक्काइडो मा धेरै राम्रो स्नोड। त्यहाँ धेरै हिउँको थुप्रो हुन सक्छ।
फेब्रुअरीमा होक्काइडो कत्ति चिसो छ?
फेब्रुअरी जनवरी संगै धेरै चिसो समय हो। विशेष गरी फेब्रुअरीको पहिलो आधा मा, दिन को समय अधिकतम तापमान लगभग ठण्डा भन्दा कम छ।
होक्काइडोमा हामीले फेब्रुअरीमा कस्तो किसिमको लुगा लगाउनु पर्छ?
फेब्रुअरी, होक्काइडोमा तपाईंलाई पूर्ण शीतकालीन लुगा चाहिन्छ। होक्काइडोमा जाडोका लुगाहरूका लागि, कृपया निम्न लेखमा सन्दर्भ गर्नुहोस्।
होक्काइडोसँग लामो हिउँद छ र टोकियो, क्योटो र ओसाकाको तुलनामा धेरै चिसो छ। जाडोमा होक्काइडो यात्रा गर्दा, कृपया बाक्लो जाडोको लुगा तयार गर्नुहोस्। म डिस्पोजेबल तातो प्याक र समान उत्पादनहरू प्रयोग गर्न सिफारिस गर्दछु। सब भन्दा राम्रो जुत्ता हिउँ जुत्ता वा हिउँ पदयात्रा जुत्ता (Sunotore) हो, तर यदि तपाईं बस ...
यदि तपाईं हिउँ हिउँदको परिदृश्यबाट आनन्द लिन चाहानुहुन्छ भने जनवरी र फेब्रुअरी उत्तम महिनाहरू हुन्। फेब्रुअरीको शुरुमा, जाडो चाडहरू होक्काइडोभरि नै गरिन्छ।
फेब्रुअरी मा होक्काइडो (सप्पोरो) मा तापमान परिवर्तन
ग्राफ: फेब्रुअरी मा होक्काइडो (सप्पोरो) मा तापमान परिवर्तन
तपाईंले माथिको ग्राफबाट देख्न सक्नुहुनेछ, फेब्रुअरीमा, तल हिउँको तापक्रम जारी रहन्छ। तापमान फेब्रुअरीको अन्तमा बिस्तारै बढ्न थाल्छ तर अझै पनि चिसो छ।
"सप्पोरो हिउँ फेस्टिवल" मा, यो रातमा धेरै चिसो हुन्छ
होक्काइडोको मौसम टोकियो, ओसाका, क्योटो आदि भन्दा बिल्कुलै फरक छ। यो सोच्नु राम्रो हुन्छ कि तापमान करिब १० डिग्री कम छ।
होक्काइडोले धेरै हिउँ पर्ने अनुभव गर्दछ। जापानको समुद्रबाट आउने बादलहरूले मुख्यतया होक्काइडोको पश्चिमतर्फ हिउँ गराउँछ।
यद्यपि होक्काइडोको पूर्वपट्टि क्षेत्रमा पश्चिमतर्फ भन्दा कम हिउँ परेको छ, तर तापमान धेरै चिसो भएको कारण तापक्रम जाडोबाट तल झर्नु असामान्य कुरा होइन।
यदि तपाईं एक जाडोको उत्सव जस्तै साप्पोरो हिउँ फेस्टिवल हेर्न जानको लागि योजना गर्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईं सम्भवतः बाहिर धेरै हिंड्नुहुनेछ। फ्रिज गरिएको सडक सतह धेरै फिसलन भएकोले, म सिफारिश गर्दछु कि तपाईले विशेष रूपमा जूतामा गैर-पर्ची उपकरणहरू राख्नु होस्।
चिसो संरक्षणको बारेमा, तल लेखको सुरूमा अधिक जानकारी छ। यदि तपाईं अधिक जानकारी चाहानुहुन्छ भने कृपया यस लेखलाई सन्दर्भित गर्नुहोस्।
यदि तपाइँ डिसेम्बर मा होक्काइडो जाने योजना बनाउनु हुन्छ भने, तपाइँ आश्चर्यचकित हुनुहुनेछ कि कति चिसो छ। त्यसो भए, यस पृष्ठमा म डिसेम्बर महिनाको लागि होक्काइडोको मौसमको बारेमा चर्चा गर्नेछु। होक्काइडो टोकियो र ओसाका भन्दा धेरै चिसो छ। जापानको पश्चिमी तर्फ, हिउँ अक्सर यति नै वर्षा हुन्छ ...
जापानमा जाडोमा लगाउन लगाउने लुगाका प्रकारहरू निम्न लेखमा संक्षेपमा प्रस्तुत गर्दछु। यदि तपाईं अधिक जान्न चाहानुहुन्छ भने कृपया यस लेखलाई सन्दर्भित गर्नुहोस्।
होक्काइडोमा मौसम डेटा (फेब्रुअरीको सुरूमा)
साप्पोरो -0.6 ℃ (-7.3 ℃) 33.5mm (55 सेमी)
ओटारु -0.8 ℃ (-6.4 ℃) 38.3mm (59 सेमी)
Asahikawa -3.1 ℃ (-13.7 ℃) 16.6mm (49 सेमी)
Biei -4.2 ℃ (-16.3 ℃) 11.4mm (52 सेमी)
फुरानो -3.9 ℃ (-16.3 ℃) 11.6mm (49 सेमी)
Wakkanai -3.2 ℃ (-7.7 ℃) 19.1mm (50 सेमी)
अबाशिरी -3.3 ℃ (-10.9 ℃) 10.1mm (29 सेमी)
उटोरो -4.0 ℃ (-11.0 ℃) 12.0mm (44 सेमी)
नेमुरो -2.2 ℃ (-8.3 ℃) 4.9mm (17 सेमी)
Kushiro -1.0 ℃ (-11.2 ℃) 5.1mm (12 सेमी)
ओबिहिरो -1.8 ℃ (-14.2 ℃) 5.4mm (11 सेमी)
Hakodate 0.7 ℃ (-6.6 ℃) 17.2mm (34 सेमी)
तातो खाना र पेयहरू "सप्पोरो स्नो फेस्टिवल" मा लोकप्रिय छन्
यो फेब्रुअरीको पहिलो आधा जनवरीको अन्तदेखि चिसो हो। फेब्रुअरीको शुरुमा होक्काइडोमा हरेक वर्ष ठण्डामा हिउँ चाडहरू आउँछन्।
जाडो चाडहरूका लागि सबैभन्दा लोकप्रिय चीज भनेको रातको उज्यालो हो। यस समयमा तपाई शून्यमा १० शून्य भन्दा तलको तापक्रममा हिंड्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तो अवस्थामा, कृपया कोट र पन्जा लगाउनुहोस्। जाडो चाडमा फुटपाथहरू राम्रोसँग मर्मत गरिएको छ, तर कृपया सतर्क हुनुहोस् किनकि सडक सतह स्थिर छ।
तातो खाना र पेय पदार्थहरू जाडोको चाड स्थलहरूमा बिक्री गरिन्छ। तपाइँको शरीरलाई तातो राख्नको लागि अवसरको रूपमा प्रयोग गर्नुहोस्।
फेब्रुअरीको शुरुमा, सप्पोरोमा सूर्योदय समय करीव :6::46 हुन्छ र सूर्यास्त समय १ 16::52२ हुन्छ।
पूर्वी होक्काइडोमा अवस्थित नेमुरोमा सूर्योदय समय करीव 6::30० र सूर्यास्तको समय करिब १ .::16 छ।
होक्काइडोमा मौसम डाटा (फेब्रुअरीको मध्य)
साप्पोरो -0.1 ℃ (-6.7 ℃) 33.5mm (53 सेमी)
ओटारु -0.2 ℃ (-5.8 ℃) 37.2mm (56 सेमी)
Asahikawa -2.3 ℃ (-12.8 ℃) 18.7mm (45 सेमी)
Biei -3.4 ℃ (-15.5 ℃) 12.7mm (53 सेमी)
फुरानो -2.9 ℃ (-15.0 ℃) 13.0mm (50 सेमी)
Wakkanai -2.9 ℃ (-7.4 ℃) 22.3mm (52 सेमी)
अबाशिरी -2.9 ℃ (-10.4 ℃) 12.6mm (27 सेमी)
उटोरो -3.7 ℃ (-10.8 ℃) 17.0mm (51 सेमी)
नेमुरो -1.8 ℃ (-7.8 ℃) .8.2.२ मिमी (सेमी)
Kushiro -0.5 ℃ (-9.9 ℃) 10.4mm (13 सेमी)
ओबिहिरो -0.6 ℃ (-12.6 ℃) 10.3mm (16 सेमी)
Hakodate 1.3 ℃ (-6.1 ℃) 22.3mm (33 सेमी)
फेब्रुअरी १,, २०१:: गोधूलिमा निगल टेरेस। जs्गलमा अवस्थित कुटेजहरूको सti्ग्रह बुटिक पसलहरू हुन् जुन हस्तनिर्मित शिल्प आइटम, फुरानो, होक्काइडो = शटरस्टकमा विशेषज्ञ छन्
फेब्रुअरीको मध्यमा, खेतहरू अझै धेरै चिसो छन्। त्यहाँ भारी हिउँ संग दिन पनि छ। यदि तपाईं लामो समयसम्म मैदानमा बस्नुहुन्छ भने तपाईं चिसो हुनुहुनेछ त्यसैले आफ्नो आन्दोलनहरूको योजना बनाउनु यो राम्रो विचार हो।
पूर्वी होक्काइडोमा अवस्थित नेमुरोमा सूर्योदय समय करीव :6:१:17 हो र सूर्यास्त समय १:16::47 छ।
माथिको तस्वीर फुरानोमा लिइएको हो। यो समयमा रात धेरै चिसो छ, तर एकै समयमा दृश्यहरू पनि धेरै सुन्दर छ। यात्रा राम्रो रहोस!
होक्काइडोमा मौसम डाटा (फेब्रुअरी ढिलो)
साप्पोरो 1.3 ℃ (-5.6 ℃) 27.1mm (39 सेमी)
ओटारु 1.0 ℃ (-4.8 ℃) 30.1mm (42 सेमी)
Asahikawa -0.5 ℃ (-11.3 ℃) 16.1mm (37 सेमी)
Biei -1.6 ℃ (-13.9 ℃) 14.1mm (42 सेमी)
फुरानो -1.1 ℃ (-13.1 ℃) 12.6mm (38 सेमी)
Wakkanai -1.2 ℃ (-6.1 ℃) 19.4mm (41 सेमी)
अबाशिरी -1.2 ℃ (-8.6 ℃) 13.3mm (25 सेमी)
उटोरो -1.8 ℃ (-9.2 ℃) 23.2mm (37 सेमी)
नेमुरो -0.7 ℃ (-6.5 ℃) 9.5mm (16 सेमी)
Kushiro 0.5 ℃ (-8.1 ℃) 7.1mm (9 सेमी)
ओबिहिरो 0.8 ℃ (-10.6 ℃) 9.2mm (11 सेमी)
Hakodate 2.7 ℃ (-4.9 ℃) 19.7mm (23 सेमी)
२ February फेब्रुअरी, २०१:: ओतारुमा मार्चेन स्क्वायर, होक्काइडो = शटरस्टक
यस समयमा, जब तपाईं टोकियो वा ओसाकाबाट होक्काइडो जानुहुन्छ, तपाईं चिसो द्वारा छक्क पर्नुहुनेछ। टोकियो र ओसाकामा वसन्त closerतु नजिक हुँदै छ, तर जाडो मौसम होक्काइडोमा जारी रहनेछ।
पश्चिम होक्काइडो, जस्तै सप्पोरोमा, हिउँ पर्न जारी छ।
फेब्रुअरीको अन्तमा, सप्पोरोमा सूर्योदय समय करीव :6:१:18 हो र सूर्यास्त समय १ 17:१:18 हुन्छ।
पूर्वी होक्काइडोमा अवस्थित नेमुरोमा सूर्योदय समय करीव 6::02० र सूर्यास्तको समय करिब १ .::17 छ।
※ सूर्योदय र सूर्यास्त समयहरू जापानको नेशनल एस्ट्रोनोमिकल वेधशाला द्वारा जारी गरिएको २०१ data डाटामा आधारित छन्। मैले फेब्रुअरीको सुरूवातको लागि 2019th औं समय, फेब्रुअरीको बीचमा १5औं समय र फेब्रुअरीको अन्त्यको लागि २th औं समय पोस्ट गरें।
होक्काइडोका लागि, कृपया निम्न लेखहरूमा सन्दर्भ गर्नुहोस्।
>> जाडो मौसम होक्काइडोमा! तपाईंले के लगाउनु पर्छ?
"फेब्रुअरी" मा फिर्ता